Mar la arag !
Monday January 11, 2021 - 09:06:39 in Articles by Hadhwanaag News
(Hoggaaminta Booliska maanta iyo shalay, Mahadhooyinkii Maxamed Saqadhi Dubbad)
Nin ganacsade oo caan ah ayaa wasdo ula tegay isagoo doonaya in uu ka furdaamiyo nin xidhnaa oo ay ehel ahaayeen, wuxuu ergo ula tegay Saqadhi Dubbad, waxaanu uga warramay ninkaasi in uu xidhnaa muddo oo uu doonaayo in la sii daayo. Saqadhi wuxuu uga dhaartay illaa maxamakadi sii dayso mooyee in aanu sharciga baal marayn. Ganacsadihii wuxuu socday illaa madaxtooyada oo uu ku lahaa galaan gal xooggan, waxa si cad loogu sheegay inaan Saqadhi la faragelin oo ay adagtahay in laga wasteeyo ninkaa. Ganacsadihii wuxuu ogaaday qiyamka iyo qofnimada Saqadhi, maalmo kaddib ayuu kusoo noqday isagoo hadyad lacag oo abaalgud ah u sida, wuxuu ugu soo galay qol aan qurux badnayn isagoo fadhiya, waxaanu ku ammaanay shaqada uu hayo, wuxuu u sheegay inuu lacag hadyad u sido. Saqadhi wuxuu ku yidhi "ku shub akoonka ciidanka lacagta aad siddo anniga hay siinne ciidanka sii.” Iimaankiisa ayaa hodan ahaa laaluushkana ma qaadan jirin.
Xilliyada qaarkood waxa uu kormeer ku samayn jiray habdhaqanka suuqa sida bacadleyaasha, gudaha ayaanu dhigi jiray kuwa hablaha sida aan fiicnayn ula dhaqma wuu la xisaabtami jiray, waxa inbadan lagu arki jiray habbeenkii isaga oo guuraynayaa oo xidhan dhar shacab hagooganna go' shaal ah, wuxuu ku kormeeri jiray shaqada gaadhi Maarka tuu ah. Wuxuu si joogto ah u kormeeri jiray saldhigyada isagoo hubin jiray in ay ku jiraan dad dulman oo lagu tacadiyay, aadbay u adkayd in Taliye saldhig iska kaa haysto sida hadda adoon maxakamad lagu geyn.
Waxa uu in badan diiddanaa in cidi qaadato dhulka dhinaca bari ka xiga saldhigga Axmed-dhagax. "Saldhigga ayuu kayd u yahay” ayuu odhan jiray. Markii xilka laga qaaday 2010kii ayaa la bixiyay. Imaka waxa dul carara maxaabiista fakata, waxaana laga sameeyay dhismeyaal halis ku ah nabadgelyada saldhigga. Dhulkaa wuxuu aaminsanaa in Saldhigu u baahan yahay.
Saqadhi Dubbad markii uu xilka wareejinaayay wuxuu ka mid ahaa haayadaha aan wareejin deynta ee lagala wareegay lacagta kaashka ah, inta badan hawl galada marka uu baxo lacagta soo hadha wuxuu ku celin jiray qasnadda ciidanka, muu ahayn nin adduun jecel, isaga kaddib talisku wuxuu noqday haayadaha laga hodmo ee laga sameeyo lacagaha. Ciidankeennu wuxuu marayaa daryeel ahaan meel liidata, mushar aan ku filayn, caafimaad la'aan, hoy la'aan, waxbarasho la'aan. Xaq waxay u leeyihiin iyaga iyo ubadkooda in la daryeelo.